Mahara maapplication nemitambo kwenguva shoma | IPhone nhau
Zvekare uye mushure mekupedza zuva reKisimusi, kubva ku iPhone News tinokuzivisa iwe zuva nezuva nezve maficha kana mitambo inowanikwa kuti utore zvachose mahara. Ramba uchifunga kuti vanogadzira havatizivise nezve kuwanikwa kwemahara kwekushandisa kana mitambo, saka zvinokwanisika kuti zuva rese, zvimwe zvekushandisa zvatinokuratidza mune ino chinyorwa, havachawanikwe mahara uye vanobhadharwa zvakare. Muchikamu chino tinokuratidza gumi maapplication emahara nemitambo.
7 Alexa Chinzvimbo
8 Nhoroondo dzeumambo 2
9 Hapana Nzvimbo
Vako bako vapamba vakadzi vese mumusha. Basa redu richava rekuvanunura.
Caveman Dino Rushvakasununguka
WikiLinks ndiyo nzira iri nyore yekufamba nayo ruzivo sezvo ichipa inonakidza nyowani yekubata-yakawanda ruzivo rwekuongorora Wikipedia.
Tichafanirwa kumisa chero chinhu chinopinda nechisimba icho nyika iri kutambura. Zambo, protagonist yedu ichave yakashongedzerwa nemabhomba, pfuti, pfuti dzemuchina, pfuti dzeplasma, varimi vemoto uye bazooka kupedzisa kurwiswa uku.
Alien Apocalypse Xvakasununguka
Oddhop mutambo wakasarudzika wepuzzle, uko mutambo wega wega unoitika panzvimbo ine hexagonal inogarwa neboka rezvisikwa. Chinangwa ndechekuhwina mapoinzi nekubvisa zvisikwa chimwe nechimwe kusvikira kwasara imwechete.
Trimaginator inokurudzirwa nekatatu kakagadzirwa nenyanzvi yemasvomhu Boris Delaunay muna 1934. Mufananidzo wacho wakadzikiswa kuita zvakakosha, uchishandura magadzirirwo ese nezvinhu zvacho kuva mativi matatu, zvichiratidza mhedzisiro iyo vamwe vanodudzira sechiyero.
Trimaginator mufananidzo mupepeti4,99 €
Slot, mutambo wepuratifomu uko protagonist iri diki uye inosetsa mutorwa uyo amhara pane yekumhanyisa kumhara pane imwe nyika isingazivikanwe kwaanofanira kutanga basa rekununura huwandu hweVana Vacheche kubva mukutyisidzira kunotyisa: vanhu vazhinji vane nzara uye iyo Misa yeMadzimambo
Tora iyo Alexa chinzvimbo chechero webhusaiti kuburikidza neiyi yekuwedzera iyo yakaiswa muSafari browser yeiyo iOS.
Nhoroondo dzeumambo 2
Mutambo wekunakidza watinopinda mushangu dzaFinn, uyo achave nebasa rekuwedzera humambo hwaMambo Arnor kana achida kukunda ruoko rwemwanasikana wake Dahla. MuKingle Tales 2, isu tichafanirwa kudaro shanda pamwe nekuvaka, kuongorora, kuunganidza, kugadzira, kugadzirisa ... asi uchigara uchifunga kuti Count Ohli nevasori vake havana kumborara.
NoLotacion inobvisa iyo data renzvimbo kubva kumifananidzo yatinotora, kuitira kuti zvisagone kuwana chaiko nzvimbo, zvakanyanya kana zvishoma, kubva kwatakatora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mahara maapplication nemitambo kwenguva shoma